Shiinaha Shiinaha soo saaraha biyuhu 130x10mm caag ah oo isku jira WPC soosaarayaasha gidaarka gidaaridda iyo alaab-qeybiyeyaasha | Lihua
Soo saaraha Shiinaha 130x10mm biiyaha aan biyuhu xirnayn ee WPC gidaarka gidaarka
Lahaanshaha Alaabada:WPC Gidaarida
Qiimo:$ 1.61 / M
Villa, aqal aqal
Sanding iyo jeexdin
Qalabkayaga WPC-ga ayaa ah mid qurux badan oo qurux badan oo alwaax dabiici ah, taabashada si fudud loo rakibo, sidaas awgeed wuxuu la kulmi karaa shuruudaha kala duwan ee macaamiisha.Waa la xiirayaa, la qodbi karaa, la qali karaa oo la jari karaa si ay ugu haboonaato qalabyo kala duwan, sida muuqaalka, beerta bannaanka , baarkinka, supermarket, iwm.
Dharkeenna derbiga ee loo yaqaan 'WPC' waa mid u roon deegaanka, oo aan dib loo cusbooneysiin karin isla markaana aan lahayn kiimiko kale oo qatar ah, uma baahna rinjiyeyn, xabag la'aan iyo dayactir hooseeya.
Xirashada derbigeennu waxay leedahay awood cimiladeed oo wanaagsan, waxay ku habboonaan kartaa laga bilaabo -40 ℃ ilaa + 60 ℃ .Dhammaanteenna derbiyada derbiga ee WPC waa kuwo u adkaysta cimilada, ka hortagga siibashada, dildilaaca yar, xargaha, kabaha cagaha saaxiibtinimo leh. , libdhi adkaysi iyo cimri dherer wanaagsanGennaanshaha cabbirka ka dhanka ah qoyaanka iyo heerkulka.
Gogosha derbiga ee WPC oo leh muuqaal alwaax dabiici ah oo loogu talagalay guriga banaanka, xirmooyinka derbiga ee WPC waxay leeyihiin dhowr qeexitaan si loo qanciyo baahiyaha iyo shuruudaha macaamiisha kala duwan. Dharka derbiga ee WPC waxay leeyihiin waxqabadka farsamada wanaagsan. 100% dib loo rogay, deegaanka u roon, keydinta kheyraadka. Midabka iyo cabbirka ayaa loo habeyn karaa baahiyahaaga, fadlan xor u noqo inaad na weydiiso.
Diidmada caabbinta saameynta badan EN 15534-1: 2014 Qaybta7.1.2.1
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.1 Midkoodna mala awaalku waa guuldaraysanayaa Ma jiro wax dillaac ah oo ka mid ah tijaabooyinka tijaabada ah
Guryaha jilicsan EN15534-1: 2014 AnnexA
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.2 Leexinta hoos u dhiganta culeyska 500N ≤5.0mm Awoodda foorarinta Culeyska ugu badan ee jabka Wajiga hore: Xamuulka ugu badan: Ula jeedka 1906Dib u eegis ku socota 250N: Ujeedka 0.64mm
Xamuulka ugu badan: Micnaha 1216N
Leexashada 250N: 0.76mm
Barar iyo nuugista biyaha EN 15534-1: 2014 Qaybta8.3.1
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.4 Barar Baaxad leh: ≤10% oo dhumucdiisuna tahay, ≤1.5% oo ballac ah, -0.6% oo dherer ah
Bararka ugu badan: ≤12% dhumucdiisuna, ≤2% ballac ahaan, ≤1.2% oo dherer ah Nuugista Biyaha:
Macnaheedu: ≤8%, Max: ≤10% Barar Baaxad leh: dhumucdiisuna tahay 2.25%, ballaciisuna yahay 0.38%, dhererkeeduna yahay 0.15%
Bararka Baaxadda: 2.31% dhumucdiis, 0.4% ballac ahaan, 0.22% dherer
Nuugista biyaha: Waxaa loola jeedaa: 5.46%, Max: 5.65%
Isugeyn balaadhinta kuleylka toosan EN 15534-1: 2014 Qaybta9.2
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.5 ≤50 × 10⁻⁶ K⁻¹ Waxaa loola jeedaa: 46.8 x10⁻⁶ K⁻¹
Ku jiid adkaysiga EN 15534-1: 2014 Qaybta7.7
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.6 Xoog ku guuldaraysiga: 479N, Qiimaha celceliska: 479N,
Habka fashilka: 479N
Waxaa jiray dillaac tijaabada tijaabada ah
Dib u noqoshada kuleylka EN 15534-1: 2014 Qaybta9.3
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.6 Heerkulka Imtixaanka: 100 ℃ Macnaheedu: 0.09%
Hore: Soosaaraha Shiinaha 3D wuxuu xardhay 157x16mm alwaax dab-balastar isku dhafan oo WPC-ga ah
Xiga: Ilaalinta deegaanka ee qurxinta bannaanka qurxinta qoryaha caaga ah ee WPC
darbiga gogosha fidinta hagaha hagaha
Q1: Maxay yihiin faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee alaabada WPC?
J: Ugu horreyntii, qalabka alwaaxda balaastigga ah ayaa 100% dib loo isticmaali karaa; waa mid muddo dheer soconaya, deggan oo loogu talagalay xaaladaha banaanka, sida qorraxda soo-gaadhista, roobka, heerkulka iwm Waxay u baahan tahay dayactir hoose, iwm.
Q2: Maxay u tahay muxuu ugu baahan yahay rakibida?
J: Markaanu rakibno sagxadda dhulka, marka hore xargaha ayaa lagu hagaajiyaa dusha sare ee dhulka oo leh T-clip ka dibna waxaan dul saarnaa sabuuradda xargaha. Waad ogtahay in guddiga dekedda WPC aan si toos ah dhulka loogu dhigi karin. Hal shay, waxay saameyn ku yeelan kartaa fiditaanka dusha sare ee sagxadda ka dib rakibidda. Tan kale, ma wanaagsana in la xakameeyo qulqulka hoosta, maxaa yeelay guddiga dekedda WPC waxaa badanaa loo isticmaalaa bannaanka, oo roobab badan da'a. Sidaas keels waa in loo isticmaalaa in lagu qabto guddiga dekedda WPC markii la rakibay.
Q3: Haddii ay jirto hal qayb oo ka mid ah sabuuradda jajaban, ma waxaan u baahanahay inaan ka saarno dhammaan guddiga si loo hagaajiyo?
J: Maya. Haddii aad beddesho jajabka jajabka ah, waxaad u baahan tahay inaad jabiso boodhadhka labada dhinac ee jeexjeexan jeexjeexan ka dibna aad ka bixiso jajabka jajaban, waa sahlan tahay.
Q4: Cufnaanta iyo xoogga decking?
J: Cufnaanta dekeddayada WPC waa 1.3% -1.4% (1300-1400kgs / CBM). Awoodda godka midi waa qiyaastii 320kgs (Taasi waa in la yiraahdo, iyadoo lagu saleynayo inta u dhexeysa xarkaha 35cm, dusha sare wuxuu qaadi karaa culeyska 320kgs.) Xoogga kan adagna waa 400kgs-500kgs. (Taasi waa waxaad dhahdaa, iyadoo lagu saleynayo inta u dhexeysa xarkaha 35cm, dusha sare wuxuu qaadi karaa culeyska 400kgs-500kgs.)
S5: Waa maxay shahaadooyinka aad haysataa?
J: ISO9001, ISO14001, CE, CO, INTERTEK, SGS, FORM E / A shahaadooyin iwm 100% hubinta tayada ka hor inta aan la soo dirin mid kasta.
S6: Waa maxay qaababkaaga Bixinta?
J: Ku aqbal lacag bixinta T / T (Wareejinta Bangiga), Western Union, iyo PayPal. Aqbal L / C marka la arko.
S7: Marka loo eego qoryaha dhabta ah, maxay yihiin faa'iidooyinka WPC?
J: Wax yar ka dib, WPC ma aha oo kaliya xoojin sare, laakiin sidoo kale waxay leedahay dab-celin. Biyo-celin la'aan, caddayn Termite, Dib loo warshadeeyay, Hadhuudhka dabiiciga ah ee dabiiciga ah, Dayactirka hooseeya, Si fudud loo rakibo, oo aan la sii deyn sun.
S8: ma sameyn kartaa midabka iftiinka ah? sida cad oo kale?
J: Haa, waan kari karnaa, midabadu wax dhib ah malahan, iskudhiska isu-bixinta wuxuu leeyahay midabbo kala duwan, fadlan noo sheeg midabka aad u baahan tahay.
Q9: Marka loo eego qoryaha dhabta ah, maxay yihiin faa'iidooyinka WPC Miyaan isku dari karaa 2 midab hal nidaam?
J: Haa, waad awoodaa! Laakiin haddii tirada ay ka yar tahay 100 mitir laba jibbaaran midabkeedu, waa inaan ka qaadnaa khidmad dheeri ah.Waxaan nahay warshad toos ah oo midabbo badan ayaa dooran kara, qiimaha badan ee ay ku jiraan qalabka iyo shaqada aan ku darno, waa inaan xakameyno qiimaha badeecada iyo rajada macaamiisha inay fahmi karaan tan.
S10: Waa maxay nidaamka loo sameeyo WPC qurxinta?
J: (a) Isku qas walxo cayriin ah iyadoo la raacayo qaacido cayiman, ka dibna ka dhig xajmooyin.
(b) Mashiinka extrusion iyo caaryada, ku qaabee waxsoosaarka qaab muuqaal iyo cabbir ahaan.
(c) Samee daaweynta dusha sare sida sanding ama embossing, ka dibna jar WPC decking by dhererka codsaday ka hor xirmo.
Caadiga ah WPC Wall Cladding
Gogosha darbiga isku dhafan ee WPC
Gogosha bannaanka ee WPC
Barkadda dabbaasha ee saaxiibtinimo ee WPC ee agagaaraha aagagga ka baxsan ...
Bannaanka Isku-darka Isku-darka Wood WPC Cladding
Bannaanka Beerta Cadaadiska Cimilada WPC Elegant P ...
Soo saaraha Shiinaha 3D wuxuu xardhay 157x16mm firepro ...
Qurxinta WPC, Dabaqa WPC, Gogosha WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, alwaax decking isku dhafan, Bannaanka WPC decking,